Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalo Shabeele Kadhacay oo Woyaanaha Khasaare Lagu Gaadhsiiyay.
Dagaalo Shabeele Kadhacay oo Woyaanaha Khasaare Lagu Gaadhsiiyay.
Posted by ONA Admin	/ January 26, 2016
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) ayaa ka warbixinaya dagaaladii ugu dambeeyay ee dhexmaray Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) iyo
kuwa gumaysiga Ethiopia ee wakhtigoodu dhamaaday.
Warku wuxuu tibaaxayaa inay dagaaladan oo kadhacay deegaamo katirsan gobolka Shabeelle khasaare laxaad leh lagu gaadhsiiyay ciidanka Woyaanaha.
Warkan ayaa intaas ku daraya in markay taariikhdu ahayd 20/1/2016 degmada Ceelwayne oo Gobolka Shabeelle katirsan dagaal Culus oo CWXO & kuwa gumaysiga Ethiopia ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay inta lahubsaday 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
Sidoonkale markay taariikhdu ku beegnayd 22/1/2016 meesha lagu magacaabo Buurwadaad oo dagmada Dhanaan ee Gobolka shabeelle katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 8 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
dhinaca kale sida uu Wariyaha ONA uga soo warama Ogadenya uu sheegay waxaa markay taariikhdu ahayd 23/1/2016 Tuulada Laab oo dagmada Boodh-Caano ee Gobolka Shabeelle katirsan
dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga Ethiopia ku dhexmaray ayaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 3 kalana lagaga dhaawacay.